Home » Vaovao mpitsidika iraisam-pirenena » Vaovaon'i Grenada » Sandal Grenada amin'ny fisokafan'ny St. George ny 31 martsa
Ao afovoan'i Pink Gin Beach manokana ao amin'ny paradisa nosy hafahafa izay manitra misy voninkazo manitra sy voninkazo tropikaly dia mampisy elixir fitiavam-pitiavana, hisokatra amin'ny 31 martsa i Sandals Grenada fialan-tsasatra izay naka ny tsara indrindra tamin'ny zavatra rehetra mba hamoronana iray manontolo. traikefa vao nahatafiditra rehetra… iray izay mitondra vahiny mihoatra ny tsy ampoizina.
Sandal resort fialan-tsasatra vaovao rehetra ao Grenada dia namorona toeram-pialan-tsasatra tsy manam-paharoa ho an'ny olon-dehibe tsy toy ny taloha.
Avy amin'ny dobo eny amin'ny lanitra sy ny efitrano fandraisam-bahiny amin'ny dobo filomanosana, Sandals dia mamonjy ireo tsy ampoizina.
Na famoriam-bola, fampisehoana mahafinaritra, fotoana spa na tennis amin'ny alina, Sandals Grenada dia mandray vahiny mihoatra ny eritreritr'izy ireo manokana.
Fantatra amin'ny anarana hoe "Island of Spice" Grenada dia paradisa tena hafahafa, iray izay lasa toerana tonga lafatra ho an'ny Resort Sandals. Ity Island of Spice ity dia fantatra amin'ny hatsaran-tarehy voajanahary mahatalanjona, moron-dranomasina madio, ranomasina manga tsy misy dikany, ary zava-manitra feno zava-manitra - kanelina, sakamalao, jirofo ary voanjo manokana, ny zava-manitra notadiavina indrindra.
Manohitra ny fivorian'ny fivoriambe nentim-paharazana, kapa Ny toeram-pialan-tsasatra vaovao rehetra any Grenada dia mitaky fanavaozana mihoatra ny sehatry ny eritreritra mba hamoronana toeram-pialofana tsy manam-paharoa ho an'ny olon-dehibe tsy mitovy amin'ny zavatra niainana hatrizay avy amin'ny dobo any an-danitra sy ny efitrano fandraisam-bahiny amin'ny dobo filomanosana ka hatrany amin'ny fandroana manokana, riandrano, ary dobo mikoriana.
Manomboka amin'ny fotoana ahatongavan'ny mpitsidika dia manomboka mikarakara ny vahininy i Sandals rehefa miala sasatra sy mankafy ny fitsangatsanganana tsy misy fihenjanana miaraka amin'ny famindrana toeram-pialan-tsasatra tsy misy fijanonana izay misy ny mari-pana sy fipetrahana malalaka sy malalaka. Na ny vahiny dia mety misafidy ny ho tonga amin'ny fomba mihaja amin'ny fiara mihaja tsy miankina amin'ny fiaramanidina kilasy voalohany izay misy sarany fanampiny.
Efitra sy suite tsy manam-paharoa
Avy amin'ny efitrano fandroana any an-danitra ka hatrany amin'ny suites Rondoval any ivelany mankany amin'ny Swim-up Suites miaraka amin'ny Tranquility Soaking Tubs, ireo efitrano sy efi-trano dia manome ny tena tsara indrindra amin'ny fanavaozana sy fampitaovana miavaka, ao anatin'izany ny dobo tsy misy fetrany eny amin'ny lavarangana midadasika, Fandroana fandroana spa, ary serivisy Butler Elite.
Ao amin'ny Sandals Resorts, ny fanaovana ny fifandraisana mety dia eo an-tanan'ny vahiny hatrany. Ny fijanonana mifandray amin'ireo olon-tianao dia mora kokoa noho ny hatramin'izay tao amin'ny Sandals Resorts. Misy fidirana Internet maimaim-poana mandritra ny fialantsasatra avy amin'ny fitaovana rehetra, na aiza na aiza ao amin'ny toeram-pialan-tsasatra ahitana ny efitrano rehetra.
Fisakafoanana tsara tsy misy fetra ao amin'ny trano fisakafoanana 10
Ny traikefa amin'ny fandrahoan-tsakafo ao Sandals Grenada dia tsy manam-paharoa any Karaiba, mankalaza ny harena epicurean avy eny amin'ny araben'i Roma ka hatrany amin'ny soa azon'ny ranomasina mankany amin'ny steakhouse voalohany an'i Sandals.
Ny fiaraha-miasa manokana miaraka amin'i Robert Mondavi Twin Oaks Wines dia mampiakatra ny fenitry ny divay "tafiditra" nidina tao amin'ny toeram-pialan-tsasatra feno tombony rehetra ao Sandals. Nomena ihany koa ny divay divay mahavariana amidy ao amin'ny lisitry ny Mpitantana sy ny Lehiben'ny.
Natao hamboarina araka ny tokony ho izy ny fisotroana - eo amoron'ny morontsiraka sy eo ambonin'ny ranomasina - mba hanomezana traikefa amin'ny nosy tena izy ny vahiny.
Nihalehibe tao amin'ny tandavan-tendrombohitra Blue misty any Jamaika, ny kafe an'ny Jamaica Blue Mountain dia manana tsiro ambony tsy manam-paharoa ary tafiditra ao amin'ireo trano fisakafoanana manokana, kafe kafe, efitrano fandraisam-bahiny, serivisy fisotroan-tena ary fanompoana an-trano.
Fomba tsy manam-petra hialana voly amin'ny tany sy ny rano
Manomboka amin'ny fivorian'ny chic ka hatramin'ny fampisehoana manaitaitra dia tsy misy manipy fety toy ny Sandals satria isaky ny alina dia misy fankalazana. Misy tennis, andro aman'alina, eo amin'ny kianja mirehitra voahodidin'ny voninkazo tropikaly manitra sy rivotra mangatsiaka mamakivaky ny hazo mikitroka; kôketa amin'ny bozaka feno emeraoda; ary volley amin'ny fasika malemy ondana. Ao amin'ny Sandals, tsy misy fetra ny zavatra azonao lalaovina.
Island Routes dia manolotra fitsangatsanganana an-tsokosoko mahafinaritra izay miainga amin'ny fahafinaretana tanteraka ka hatrany amin'ny latabatra mahafinaritra. Na inona na inona haingam-pandeha tadiavina, ny vahiny dia hahazo fahitana anatiny sy fomba fijery vaovao momba ity paradisa tsara tarehy antsoin'i Sandals tranony ity.
Ny faritry ny pisinina dia namboarina indray hanararaotra feno ny tontolo tropikaly maharikoriko ao amin'ilay nosy, ary tsy misy hita miharihary toy izay amin'ny farihy amoron-dranomasina. Amin'ny antoandro, ny fomba fijery dia mahavariana fotsiny amin'ny dobo tsy manam-petra mifangaro milamina mankeny amin'ny faravodilanitra. Tongava ny alina, ny lavaka famonoana afo sy ny endrika mampisy afo dia manova ny pisinina ho efitrano malalaka any ivelany.
Mandehana an-tsambo ary milentika amin'ny fanatanjahantena anaty rano be dia be. Miaraka amin'ny fitaovana avo lenta, mpiasa matihanina, ary toerana tropikaly tsy manam-paharoa, afaka misafidy ny manidina manerana ny rano ny vahiny - entin'ny rivotra, motera na herin'ny hozatra - na milentika any ambanin'ny tany madio.
Ny antsitrika scuba amin'ny Sandals dia tena manome ny vahiny ny fitaovana tsara indrindra, ny mpiasa ary ny toerana antsitrika tsy mampino - tafiditra ao avokoa. Avy amin'ny mpandrindra, BCD, sarontava, snorkeling, vombony ary tanky hatrany amin'ny sambo diesel Newton kambana farany ambony sy ny fitarihan'ny manam-pahaizana avy amin'ireo matihanina antsitrika PADI, Sandals dia mikarakara ny zava-drehetra.
Serivisy tsy manam-paharoa manokana, na dia mpitondra kapoaka aza
Ao amin'ny Sandals, tafiditra ao avokoa ny gratuities rehetra. Manomboka amin'ny lakolosy ka hatrany amin'ny mpiandry ka hatrany amin'ny mpivarotra arabe dia karakaraina tsara ireo torohevitra rehetra. Ankafizo ny fandraisam-bahiny nateraky ny orinasa Sandals Resorts sy ny serivisy manokana ary avelao any an-trano ny kitapom-bolanao. Ny mpivaro-tena ihany no avela hahazo torohevitra.
Ny Serivisy Butler tsy manam-paharoa an'ny Sandals, izay misy ihany amin'ny ambaratonga avo indrindra, dia manome ny vahiny mahay manavaka faran'izay avo indrindra amin'ny serivisy sy ny haitraitra, izay antenaina ny filàna rehetra.
Manala baraka sy tantaram-pitiavana
Ny Experience Luxury Included Experience dia manomboka amin'ny Club Sandals, toerana tototry ny tombony miavaka, traikefa tsy manam-paharoa, ary serivisy miavaka ho an'ireo vahiny mivady ao amin'ny Sandals Resorts. Ny fitiavana mandray vahiny dia novaina tanteraka, ahafahan'ny vahiny mankafy serivisy iray sy fialan-tsasatra tanteraka amin'ny fampiononana efitrano fandraisam-bahiny mahafinaritra.
Ny fombafomba eropeana kilasika dia adika amin'ny fomba mampiavaka an'i Karaiba ao amin'ny Red Lane Spa any Sandals Grenada. Hahita fahatsapana fitoniana tsy manam-paharoa ny vahiny miaraka amina karazana serivisy manokana voafangaro vokatra botanika, manova ny fikatsahana hatsarana anaty ho lasa fitsangatsanganana tsy misy fiafarana.
Ny fampakaram-bady fampakaram-bady rehetra atsy Sandals dia mitaky ny ahiahy tsy amin'ny drafitra, manome fotoana bebe kokoa ny vahiny hankafizany ny fotoana. Ny tsara indrindra, na ny fampakaram-bady aza tafiditra!
Roa herinandro sisa dia hiasa i Sandals Grenada amin'ny alàlan'ny fomba fandraisana azy ireo hankafy fety amin'ny fomba niniana natao - miaraka amin'ny zavatra rehetra karakaraina sy ny fialan-tsasatra mahafinaritra sy mahafinaritra ary eny, ireo tsy ampoizina.
Royal Caribbean Group dia mivarotra ny marika Azamara